Akụkọ - Omenala aluminom mere nke kwesiri ime ihe ojoo
1. Ọ ga-n'ezie na-ahaziri?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi profaịlụ aluminom maka mpempe mpụga nke akụrụngwa, a na-atụ aro ka ị ghara ịhazi, n'ihi na profaịlụ aluminom nke ụlọ ọrụ bụ profaịlụ aluminom dị elu, na enwere ọtụtụ nkọwa, nwere ike izute ihe niile chọrọ nke kpuchie ya. Na akụrụngwa zuru oke, nhọrọ njikọ dịgasị iche maka ịhọrọ. Fọdụ ndị nwere ike ikwu na etiti m abụghị akụkụ anọ mana ọ bụ polygonal, ebe akụkụ nke aluminom na-arụ ọrụ bụ akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ. Enwere m ike ikwu n'ụzọ doro anya na nke ahụ abụghịkwa nsogbu ọ bụla, ọ bụrụhaala na oghere oghere ahụ, enweghị mgbakọ mgbali, ụlọ ngosi ihe ngosi aluminom anyị na-eji ihe profaịlụ aluminom arụ ọrụ.
2. Na thicker ndị aluminom, nke ka mma?
Ọ bụrụ na ị ga-ahazi profaịlụ, ọ bụghị ihe dị oke ọnụ iji hazie ya. Onu ogugu onu ogugu nke profaịlụ aluminom bu ezigbo onu ahia ma e jiri ya tụnyere ihe ozo. Profilesfọdụ profaịlụ aluminom dị mkpa iji rụọ ọrụ ụfọdụ, yabụ mgbe atụmatụ nke eserese eserese dị oke oke, iji nweta ikike ibu ibu. Mana achọrọ m ịsị na mgbidi mgbidi abụghị nke ka mma, n'otu aka, ọnụahịa mgbidi ahụ dị elu karịa, ọnụahịa alloy aluminom n'onwe ya dị elu, nke na-abawanye ụgwọ; N'aka nke ọzọ, na mgbidi nke mgbidi ahụ dị ntakịrị, ọ na-eme ka ihe isi ike dịkwuo ala. Dị ka 6063 aluminom profaịlụ anyị na-emekarị, ọkọlọtọ ike bụ 8-12HW. Ọ bụrụ na mgbidi mgbidi dị oke, oke ike nwere ike iru 8HW. Dịka ọmụmaatụ, mgbidi ọkpụrụkpụ nke profaịlụ aluminom anyị bụ naanị 2mm, mana imepụta ya nwere ezi uche, nke nwere ike ibute ihe dị elu dị mkpa.
3. nwere ike ikpokọta profaịlụ abụọ ahụ n'otu?
Fọdụ ndị ahịa chọrọ ịchekwa ụfọdụ ụgwọ ebu ma ọ bụ nwee echiche ndị ọzọ, enwere ọtụtụ ụdị profaịlụ aluminom ahaziri, kwesịrị iji nchikota ọtụtụ profaịlụ aluminom, ndị na-emepụta ụlọ ọrụ ndị ahịa ga-ejikọ ihe abụọ ahụ na ebu, chee na nke a nwere ike ịzọpụta ọtụtụ ihe. N'ezie, aga m ekwu na ọ ga-egbu oge. Anyị nwere otu onye ahịa nke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otu a. Anyi kwesiri imeghe uzo abuo, otu nke nwere mgbidi di ezigbo nma ma nke ozo ya na mgbidi di oke. Mgbe e mesịrị, agbanwere m nhazi ihe osise ahụ ma jikọọ ihe abụọ ahụ, na-eme ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ndị ahụ. M gbalịrị ịgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe. Mgbe N oge nke ikpe, ndị ebu ruru eru. N'ihi na ọkpụrụkpụ nke mgbidi ahụ sara mbara nke ukwuu, ọ na-esiri ya ike ịmịpụta.
4. Kedu onye nwere ụdị profaịlụ aluminom ahaziri?
Omenala emere aluminom kwesiri ka edozi ya, ma ndi ahia gha akwu ugwo a gha emeghe ya (enwere ike iweghachi ya ma oburu na onu ogugu kwa afo rutere onu ogugu). Mgbe ahụ nwe nke ebu ahụ ga-abụrịrị onye ahịa, nke a enweghị mgbagha. Ma ebu bụghị n'ozuzu napụrụ ndị ahịa, ma na-nọ na emeputa. Ebe ọ bụ na a naghị enyekarị profaịlụ aluminom ahaziri otu ugboro, ọ dịchaghị uru ndị ahịa na-akpọrọ ha laa. Onye na-emepụta ihe nwere ụlọ nkwakọba ihe pụrụ iche iji chekwaa ebu ahụ, na ebu ahụ bụ ogo ọla edo H13, ọ naghị adị mfe imebi. Maka ụfọdụ ebumnuche pụrụ iche, ụfọdụ ndị ahịa ga-achọ iweghachi ebu ma gbanwee ya na ụlọ ọrụ ọzọ maka imepụta ya. M ga-adụ gị ọdụ ka ị gbalịa ka ị ghara ime nke a ma kpebie ebe ịchọrọ ịme ya tupu ị mepee ebu ahụ. N'ihi na ọ bụla aluminum extruder emepụta abụghị otu, anwụ na mpe mpe akwa, anwụ mkpuchi nkọwa na-dị iche iche. Anyị ezutewo ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ịkpụzi ha na ụlọ ọrụ anyị maka imepụta, mana anyị ji olu ọma jụ ha.
Ihe dị n'elu bụ ihe m chọrọ iwebata, enwere m olileanya na ọ nwere ike inyere gị aka.